Uma usunebhizinisi isikhathi eside, uyazi ukuthi iyini i-swag. Ingabe wake wazibuza ngomthombo waleli gama, nokho? I-Swag empeleni yayikhulunywa ngempahla eyebiwe noma impango eyasetshenziswa ngeminyaka yawo-1800s. Igama elithi isikhwama cishe beliwumthombo we-slang… ufaka yonke impango yakho esikhwameni esiyindilinga futhi ubaleke ne-swag yakho. Izinkampani eziqophayo zamukela leli gama ekuqaleni kwawo-2000 lapho zihlanganisa isikhwama